Bit By Bit - tijaabo Orodka - 4.2 Waa maxay tijaabo?
Tijaabo kala sooca lahayn ay gacanta ku leeyihiin afar ah maaddooyinka waaweyn: qorista ee ka qaybgalayaasha, randomization daaweynta, bixinta daawaynta, iyo cabbirka ee natiijada.
Dhibaatooyinka la isku haleynayaa waxay leeyihiin afar qaybood oo waaweyn: qorista kaqeybgalayaasha, kala xulashada daaweynta, bixinta daaweynta, iyo cabbirka natiijooyinka. Da'da dijitalka ahi ma badalayso dabeecadda asaasiga ah ee tijaabinta, laakiin waxa ay si sahlan u sameysaa. Tusaale ahaan, horay, waxaa laga yaabaa in ay adagtahay in lagu cabbiro habdhaqanka malaayiin qof, laakiin hadda waxa ay si joogta ah u dhacdaa nidaamyo badan oo dijital ah. Cilmi-baareyaasha oo ogaan kara sida loo leexiyo fursaddan cusub waxay awood u yeelan doontaa inay tijaabiyaan tijaabooyinka aan horay loo arag.
Si aad tan u samayso waxoogaa xaddidan-labadaba waxa sii jiray iyo wixii isbeddelay-bal aynu eegno tijaabada ah Michael Restivo iyo Arnout van de Rijt (2012) . Waxay doonayeen inay fahmaan saamaynta abaalmarinta asaaga ah ee aan rasmiga ahayn ee ku saabsan qaybta tifaftirka ee Wikipedia. Gaar ahaan, waxay daraasad ku sameeyeen saamaynta barnstars , abaalmarin kasta oo Wikileakiyiin ah uu siin karo qof kasta oo Wikileakiya si uu u aqoonsado shaqo adag iyo dadaal taxadar leh. Restivo iyo van de Rijt waxay u sameysay barnstars 100 u qalantaan wikipediaey. Kadibna, waxay raadinayeen deeqaha ku-xigta ee ku-xigeenka ah ee ku-xigeenka Wikipedia ilaa 90-ka maalmood ee soo socda. Inta badan waxay la yaabeen, dadka ay ku siisay barnstars waxay u ekaayeen in ay sameeyaan wax yar ka dib markii la helo. Si kale haddii loo dhigo, barnstars waxay u egtahay inay niyadjabinayso halkii ay dhiirigelin laheyd waxtarka.
Nasiib wanaag, Restivo iyo van de Rijt kuma aysan soconin "perturb iyo observers" tijaabada; waxay ku shaqeynayeen tijaabo kontaroolan oo la kala doortay. Marka, marka laga reebo doorashada 100 ka mid ah dadka ugu sarreeya si ay u helaan barnstar, waxay sidoo kale soo xaadireen 100 ka mid ah dadka wax soo saara kuwaas oo aan iyagu midna bixin. 100kani waxay u adeegeen koox ahaan. Iyo, ficil ahaan, oo ku jiray kooxda daaweynta iyo kuwa ku jiray kooxda xakamaynta ayaa si gooni loo go'aamiyay.
Marka Restivo iyo van de Rijt ay eegeen dabeecada dadka ku jira kooxda xakamaynta, waxay ogaadeen in tabarrucdooda ay hoos u dhaceen. Dheeraad ah, markii Restivo iyo van de Rijt la barbardhigeen dadka daaweynta kooxeed (sida, barnstars) waxay u direen dadka ku jira kooxaha xakamaynta, waxay ogaadeen in dadka ku jira kooxda daaweyntu ay ku kordhiyeen ilaa 60%. Si kale haddii loo dhigo, tabarrucyada labada kooxoodba way khasaareen, laakiin kuwa ka tirsan kooxda xakameyntu waxay sameeyeen wax aad u dhakhso badan.
Maadaama daraasadani muujinayso, kooxdii kantaroolka ah ee tijaabooyinka ah waxay muhiim u tahay habka uu yahay mid aan caadi ahayn. Si loo hubiyo saamaynta barnstars, Restivo iyo van de Rijt ayaa loo baahan yahay in lagu ilaaliyo dadka aan helin barnstars. Marar badan, cilmi baarayaasha aan aqoon u lahayn tijaabooyinka ayaa ku guul daraysta inay qiimeeyaan qiimaha aan la aamini karin ee kooxda xakamaynta. Haddii Restivo iyo van de Rijt aysan laheyn koox kantarool ah, waxay ku soo geli lahaayeen natiijada khaldan. Kooxaha kantaroolka ayaa aad muhiim u ah in shirkada weyn ee shirkada gawaarida waaweyn ay sheegtey in ay jiraan seddex siyood oo kaliya oo shaqaalaheeda laga eryi karo shirkaddiisa: xatooyo, dhibaateyn galmo, ama tijaabin tijaabo ah oo aan lahayn kooxda la (Schrage 2011) .
Restivo iyo van de Rijt daraasaddan ayaa muujinaysa afarta qaybood ee ugu muhiimsan ee tijaabada: qorista, kala soocidda, faragelinta, iyo natiijooyinka. Wadajir ahaan, afartan qaybood oo ka mid ah maaddooyinkaas ayaa u oggolaanaya saynisyahannadu in ay ka gudbaan meelo ka baxsan isla markaana ay cabbiraan saameeynta natiijada daaweynta. Gaar ahaan, kala soocista macnaheedu waa in dadka ku jira kooxaha daaweynta iyo kuwa xakameyntu ay isku mid noqon doonaan. Tani waa muhiim sababtoo ah waxay ka dhigan tahay in wax kasta oo isbeddel ah ee ka soo baxa labada kooxoodba loo aaneyn karo daaweynta oo aan ahayn wax wareersan.
Marka laga soo tago sawir wanaagsan oo ku saabsan farsamooyinka tijaabooyinka, dib u eegista Restivo iyo van de Rijt ayaa sidoo kale muujinaysa in sahayda tijaabooyinka digital-ka ay ka duwanaan karaan kuwa tijaabooyinka analogga ah. In dib loo eego dib u eegista Denbighet iyo van de Rijt, way sahlanayd in la siiyo barnstar qof kasta, waana sahal udub dhexaad ah oo ku saabsan natiijooyinka - in muddo dheer ah (sababtoo ah taariikhda taariikhda si toos ah ayaa loo diiwaangeliyaa Wikipedia). Awoodgan oo lagu bixinayo daaweynta iyo cabbiraadda natiijooyinka iyada oo aan wax kharash ah lagugu qiimeeyo waa mid aan ka duwaneyn tijaabooyinkii hore. Inkasta oo tijaabadani ay ku lug lahayd 200 qof, waxaa laga yaabaa in lagu ordi karo 2,000 ama xataa 20,000 oo qof. Waxa ugu muhiimsan ee ka hortagaya cilmi-baarayaasha in ay kor u qaadaan tijaabadooda ayadoo ay sabab u tahay 100% ma ahan mid kharash ah; Waxay ahayd anshax. Taasi waxay tahay, Restivo iyo van de Rijt ma aysan dooneynin inay bixiyaan barnstars si ay u qiimeeyaan tifaftirayaasha, mana doonayaan inay tijaabiyaan inay carqaladeeyaan bulshada Wikipedia (Restivo and Rijt 2012, 2014) . Waxaan ku soo laaban doonaa qaar ka mid ah tixgelinta anshaxa ee kordhay tijaabooyinka dambe ee cutubkan iyo cutubka 6aad.
Ugu dambeyntii, tijaabinta Restivo iyo van de Rijt waxay si cad u muujineysaa in inkastoo astaamaha aasaasiga ah ee tijaabooyinka uusan isbeddelin, sahayda tijaabooyinka da'da digital-ka ah ayaa si aad ah u kala duwan. Marka xigta, si aad si cad uga takhalusto fursadaha ay sameeyeen isbeddelladan, waxaan isbarbar dhigi doonaa tijaabooyinka ay cilmi-baarayaashu hadda sameyn karaan noocyada tijaabada ah ee la soo dhaafay.